Iva Nehanya Nezve Kubhadhara
Kutarisirwa Nekuda kwehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji, hupenyu hwedu hwakanyatso shandurwa, asi kubiridzira kwakawanda kunoonekawo mu network. Mumwe wevatengi hukuru kubva kuEuro akarasikirwa kanopfuura ka15000usd muna Kubvumbi, 2020. Anoramba achipinza coils simbi kubva kwatiri, asi nekuda kwehutachiona hwekupararira, anoda kuita rimwe bhizinesi pamaski uye zvinodiwa ...
Chitsva Chava Kugadzirira Kushanda
Mr Xue yingjian, avo vanga vachishanda mumunda wesimbi makore anopfuura makumi maviri. Iye akabatana nekubuda kwezuva indasitiri boka muna 2000 gore, uye vachiita kutengesa mu bazhou kubuda kwezuva wuhuan pipe co., Ltd. Akave maneja wekutengesa, maneja wekugadzira, maneja maneja nekushanda kwake nesimba nhanho nhanho. Iye akamisa SUNRISE HOLDINGS CO ...
Vadiwa ZVESE Tichaenda kunopinda guangzhou carton fair kubva muna Chikumi 15 kusvika Chikumi 25 Nekuda kwehutachiona hwakapararira pasirese, hatigone kuenda kuGuangzhou kunosangana, saka tinotarisa online show. Iyi inyanzvi nyowani yekupa online show. Kunyangwe iwe uri kumba, iwe unogona kuona chigayo chedu. Unogona kuona zvese ...